Microsoft Windows 10 Upgrade khulula Revisited - Izindaba Rule
Microsoft Windows 10 Upgrade khulula Revisited
Ngaphezu kwe 200 million abantu basebenzisa kakade Windows 10, kodwa ngeke software yakho endala nemijikelezo lisasebenza uma ukwamukela lokhu ngcono Kunconywa?
Lesi sihloko osesikhundleni “Microsoft Windows 10 kubuyekeze khulula abuyele: ezintathu, kuphendulwe nemibuzo yakho” lalotshwa Jack Schofield, ngoba theguardian.com ngoLwesine 11th February 2016 09.04 UTC
I ngcono kusuka Windows 7 ukuze 10 futhi yayibukeka njengesikhonyane konke kwahamba emihle, nakuba kwashintsha yami hlenga ekhaya screen futhi lapho icons yabalwa. Into eyodwa angikwazi ukufika ukusebenza kuyinto HP OfficeJet wethu 7310 idivayisi Zonke-in-One, umsebenzi Wayenyathelisa, imishini yokukopisha, isithwebuli, futhi fax machine. Manje umsebenzi iphrinta nguye kuphela osebenzayo. Steve
New nhlelo ngokuvamile badinga abashayeli ezintsha, futhi ukuze isebenze ngokugcwele, lokhu ngokuvamile kusho abashayeli olunikezwa umkhiqizi. Uma lezi awatholakali, Microsoft ukufaka abashayeli generic. Mhlawumbe yilokho okwenzeka lapha, ngephutha.
Ngenhlanhla, HP liyasinika 32-bhithi no 64 bhithi-Windows 10 abashayeli ngoba HP OfficeJet 7310. Ukuze uthole ukuthi lapho udinga, qhebeza kwesokudla inkinobho Qala bese ukhetha System. Bheka ngaphansi kwesithi "uhlobo System": ngakho nakanjani uzokuzwa athi into efana "64-bit Operating System".
Ukuze ushintshe screen saver-, ukuya Qala imenyu bese ukhetha Izilungiselelo. Olandelayo, chofoza nguwe, ke Khiya isikrini, futhi afune "izilungiselelo Screen Saver" ezansi kwekhasi. Ngemva kwalokho, izinketho kangako njengalezi esizibona Windows 7.
Manje icons Desktop uyakhathazeka. Qala imenyu ibonisa izicelo zakho kakhulu-esetshenziswa, nokufinyelela ngokushesha, ungakwazi pin zokusebenza oyikhonzile ukuze kubha yomsebenzi - njengasezulwini Windows 7.
Noma kunjalo, icons zakho zona kungenzeka zisalokhu zingenazo khona. Chofoza kwesokudla i-kudeskithophu, ukhetha Hlola, ke ukuya phansi imenyu lapho lithi "Bonisa ideskithophu icons". Ukuchofoza umbhalo uyobenza kweso avele noma sithela.
Uma ufuna ukwengeza isithonjana ulahlekile, ukuthola uhlelo kwimenyu Qala (isibonelo Zonke izinhlelo zokusebenza) futhi umane idonsele desktop. Nokho, wazi ukuthi imifanekiso ideskithophu kukhona nje izinqamuleli: abazi ubuyekeze like Tiles Live.
Ekugcineni, iya emuva Izilungiselelo / nguwe, khetha Okuningi midi, bese uchofoza lapho lithi "izilungiselelo Desktop icon". Lokhu kukuvumela wengeze noma ukukhipha izithonjana zohlelo esidala ezifana Lokhu PC (aka Computer yami), Amafayela yomsebenzisi, Network kanye Recycle Bin.
Ukugcina software abakhiqizi '
Ngiye upgraded Sony Vaio yami SVE15129CN ukuba Windows 10 futhi konke bekuhamba kahle. Uma ngigijima ku izinkinga kamuva, futhi ngikhetha ukusebenzisa Windows 10 Ukufakwa Media, website Microsoft lithi izinhlelo zokusebenza ukuthi umkhiqizi yami PC efakwe luzokhishwa.
Nakuba Ngiyakuzonda eziningi Sony zokusebenza, abanye babo impela ewusizo. Ngifuna ukuthi kufanele afakwe futhi emva reinstallation ehlanzekile Windows 10.
Uba ngingambuyisi ehlanzekile ukufaka ngemva konyaka khulula kubuyekeze ukutholakala (ie 29 July 2016), kuthanda ikhophi yami ye-Windows kusebenze bese kuba yinkosi yaseSalema? Nikhil
The Windows 10 e-indawo ukuthuthukisa pretty okuningi ukufakwa ehlanzekile. Windows 10 efakwe, Izinto zakho ezindala iyakopishwa yonkana (Ngezinye izikhathi ikhumbule izilungiselelo ambalwa), bese ohlelweni lokusebenza elidala agcinwe okwesikhashana kwifolda ehlukile. Lokhu kuyadingeka uma kwenzeka unezinkinga ayikwazi ixazululwe ngumuntu vuselela uhlelo (Amasethingi > Update & Security > Lokubuyisela > Setha kabusha PC) futhi ufuna ukubuyela okuthuthukile.
Njengoba wena uthi, ungenza ukufakwa msulwa DVD noma USB usebenzisa i-Windows 10 Ukufakwa Media. Kunjalo, lokhu kulanda akubandakanyi zihlanganisa isofthiwe wabenzi PC sika izikhwebu. Ngempela, kuvame isizathu esiyinhloko sokuba ngokwenza ukufakwa ehlanzekile. Ngakho, ngaphambi wenze enye, hlola Vaio amakhasi ewebhu ukuze uqiniseke ukuthi ungakwazi redownload iyiphi isofthiwe izikhwebu futhi abashayeli udinga. Izibonelo zihlanganisa Windows 10 Upgrade ikhasi, Windows 10 Ungakwenza kanjani & Amaprosesa asekelwe, futhi abashayeli, Firmware & Software.
Khumbula ukuthi Microsoft usinikeza konke abakhiqizi ayo PC ngekhodi generic Windows. It has ukulawula lokho bangenezela kanjalo kukho, futhi ayikho indlela yokwazi ukuthi bona ngezifiso Windows ihadiwe zabo.
Nokho, ngoba vele kwenziwa e-indawo lokulungiswa Windows 10, ukhiye kusebenze manje ku-intanethi. Uma wenza kanjalo ukufakwa ehlanzekile, kufanele kusebenze ngokuzenzakalelayo, ngaphandle kokubheka usuku.
Will umsebenzi wami endala Office?
Will Excel yami naseZwini 2000 ukusebenza nge Windows 10? Bruce
Izingxenye eziyinhloko ze-Microsoft Office kubonakale ukusebenza in Windows 10, futhi Microsoft Gabe Aul - a VP in the team Windows - ubhale shot isihenqo it egijima Office 95 kusukela 1995. Isicelo sokuthi kubonakala kuyinkinga kakhulu uhlelo Outlook imeyili nomhleli. Nokho, njengoba nanoma Uhlelo, ungakwazi njalo zama Mode Oluvumelana. Ukuze wenze lokhu, qhafaza kwesokudla-on ohlelweni bese ukhetha Properties kusuka kwimenyu olwehliswayo. Thikha ibhokisi elithi "Qalisa le e ukuhambisana modi:"Bese ukhetha inguqulo ye-Windows kusuka 95 ukuze 8.
Windows 10 kufanele uzitholele izinhlelo Office yakho, kodwa lokhu engase yonakale. Okungcono, kufanele original Microsoft Office DVD yakho futhi ikhophi ukhiye umkhiqizo ukuze ungakwazi kabusha uyifake. (A Uhlelo ezifana Belarc Advisor ngeke ukuqaqa eHhovisi Windows umkhiqizo okhiye PC yakho: Qiniseka ngokuphelele wazi kokubili.) Kufanele futhi Ukusekela ngokulondoloza idatha yakho, futhi kungcono ehlakaniphile ukuba isipele PC yakho yonke ngaphambi kokwenza izinga enkulu.
Nokho, Office 2000 kuyinto Antique. It wethulwa June 1999, futhi Microsoft wayeka zokweseka nge zokuvikeleka 10 eminyakeni eminingi kamuva, in 2009. Lokhu kungafaka ngikushiye ukuvula ukuba okuthiwa igciwane Macro ukuhlaselwa, Nokho bambalwa kakhulu abantu sebenzisa Office 2000, Angikholwa ukuthi noma iyiphi abalobi malware basaqhubeka ezibhekiswe it.
Personally, Ngizobe ukuthenga entsha, ikhophi kakhulu ncono Microsoft Office, noma sebenzisa khulula izinhlelo Office online in OneDrive yakho. Uma athuthuke ukuze Windows 10, ungase futhi ufake khulula IZwi Hambayo ne-Excel Hambayo zokusebenza kusukela Isitolo se-Windows. Lezi ingakusiza ukuba wenze umsebenzi okungaxhunyiwe ku-intanethi.
Nokho, njengoba uku kalukhuni 16 iminyaka ngemuva ezingeni lamanje Microsoft Office, cishe babekwazi side-kulibanga LibreOffice 5.1. Kumahhala, ngakho ungabheka ukuqinisekisa ukuthi Ukulayisha amafayela akho ngendlela efanele. Futhi, the LibreOffice 5.1 interface yomsebenzisi ngisondelene kakhudlwana Office 2000 kunokulahlekelwa Office 2016, ngoba Microsoft wethula entsha interface umdweshu-based nge Office 2007.
• Microsoft Windows 10 kubuyekeze khulula: imibuzo emihlanu waphendula
• Microsoft Windows 10 kubuyekeze khulula: 10 more kuphendulwe nemibuzo yakho
• Microsoft Windows 10 kubuyekeze khulula: imibuzo eyisikhombisa waphendula
• Microsoft Windows 10 kubuyekeze khulula: the roundup last
• Microsoft Windows 10 kubuyekeze khulula abuyele: eziyisikhombisa, kuphendulwe nemibuzo yakho
• Imibuzo yakho mayelana nokuthuthukela Windows 7 ukuze Windows 10, kungokufanayo nangendoda.
26877	10 Isigaba, Buza Jack, Computing, Izici, Jack Schofield, Technology
← Konke You Need to Know mayelana Waves adonsela phansi Izinzwa eziningi kakhulu Mpango Memory →